अस्ट्रेलियाको बोर्डर कहिले खुल्छ ?
- राजन गाेदार
बडेबडे प्रयोगशालाका बड्डाहरूको भेजा फ्राई भएको छ । कथित् पहिलो विश्व नै भेउ पाइरहेको छैन । हरेक देश झ्यालखाना, हरकोही कैदी भएर २१औँ शताब्दी जोक बनिरहेको बेला, जीवनजगत्‌को सन्तुलन नै खलबलिएको बेला करिअरको कुरा सायदै सान्दर्भिक होला । जीवन नै धरापमा छ, नाथे करिअरको कुरा के गर्नु भन्ने मान्यतामै थिएँ । तर, करिअर थ्रु स्टडी अब्रोडको उद्देश्य बोकेका तमाम युवाहरूको प्रश्नले चुपचाप बस्न दिएनः बोर्डर कहिले खुल्छ ?
सक्कली प्रश्नको नक्कली जवाफ दिने बानी छैन । सरल र स्पष्ट जवाफ छैन । हरदिन बारम्बार स्मार्टफोनमा त्यही प्रश्न पप अप हुन्छ । किताब पढ्नु, सिनेमा हेर्नु, गीत सुन्नु, योगध्यान गर्नु, लर्निङ प्लेटफार्महरूबाट केही सिक्नु नि । बित्थामा तनाव लिएर, दिएर के हुन्छ ?
हो, यो स्वास्थ्य मात्रै होइन, करिअरको पनि संकटकाल हो । करिअर सुरु गर्न लागेकाहरूको के कुरा, स्थापितहरू नै करिअर संकटमा छन् । कोरोना दुष्ट अजिंगर भएको छ, घरघरमा छिरेर अवसादको ज्वरो रन्काएको छ । जान्दछु, आफ्नै सपनाले चुटिएर मान्छे कसरी थला पर्छ ।
एक किसिमले म ओभरथिंकरहरूकै कित्तामा पर्छु । तर, एउटा सामान्य अनुरोध गर्छु, बोर्डरसँग करिअरको गाँठो तपाईं आफैँले गाँसेको हो, फुकाईदिनुस् । समय प्रतिकूल छ । अनुकूल समयको कुरा त्यतिबेलै गरुँला ।
हामी त तेस्रो मुलुकका मान्छे, तिनले हाम्रा लागि आफ्ना बोर्डर कहिले खोल्लान् कुनै ठेगान छैन । अहिलेकै परिवेश हेर्दा यस्तै देखिन्छ कि मिल्थ्यो भने, कतिपय देशका सरकारहरू आफ्ना नागरिकबाहेक अन्य चराहरूलाई पनि 'प्रवेश निषेध' लागू गर्न चाहन्छ ।
प्लस, थरीथरीका बहाना र स्वार्थका कारण नेपाल कोभिडफुल बन्दै छ । नबनोस्, बनिहाल्यो भने सारा विश्वले हामीलाई नो इन्ट्रीको ट्याग देखाउनेछ । अहिले छिट्टै खोल्लान् भनी आसमा बस्नु सकारात्मक त हो तर सकारात्मक मूर्खता ।
जति धेरै तपाईं अनेक देशका बोर्डरहरूसँग आफ्नो करिअरको गाँठो कस्दै जानुहुन्छ त्यति धेरै निरीह बन्दै जानुहुनेछ । डिप्रेसनले वैकल्पिक सम्भावनाहरूको महत्त्व मेटिदिनेछ । त्यो ज्वरोमा, आफैँलाई पानीपट्टी लगाउन सक्नुभएन भने ? विवेकले होस् वा विज्ञानले कोभिड १९ लाई नजितेसम्म मानवीय मूल्यमान्यता कहीँकतै देख्न पाइने छैन । प्रवेश निषेधको ट्यागले तपाईं हाम्रो सपना मात्रै कहाँ हो र सिधै मानवताको घाँटी रेटेको छ । यस्तो प्रतिकूल समयमा तपाईं अझै आस गर्दै हुनुहुन्छ ? स्टे अलर्ट, स्टे स्मार्ट ।
सुरुमा कोरोना देखाउँदै अमेरिकाले बोर्डर बन्द गरेर दुनियाँलाई तर्सायो । र, दुनियाँले उसको सिको गर्‍यो । हिजो ठीकै थियो, आज त कोरोना हिजोको एलियन जस्तो पनि छैन, तैपनि बोर्डर बन्द छ । तपाईंले रोज्नुभएका केही गन्तव्य राष्ट्रका बोर्डरहरू भने कहिले खुला, कहिले बन्द छन् । र, केहीले आजसम्म पनि खोलेका छैनन् । नखोलेकाहरूको आसै नगरौँ । खोल्ने बन्द गर्ने गर्दै आइरहेकाहरूले पनि अब हाम्रा लागि सायदै खोल्लान् । तसर्थ, अब बोर्डर र करिअरलाई बेग्लाबेग्लै राखेर हेर्न सुरु गर्नुस् । यसरी नहेरी कसरी हेर्ने ? यसरी नहेरी सुखै छैन ।
विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीतिभित्रै कोभिड १९ घुसेको छ वा घुसाइएको छ । प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया सुरु भएर के गर्नु, अनिश्चितकालका लागि प्रवेश निषेध छ । आशैआशमा के बस्नु, प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया नै अवरुद्ध छ । प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया चले पनि, प्रवेश निषेध नभए तापनि भोलिको नीति निश्चित छैन । हातमा प्रवेशाज्ञा भएर के गर्नु, प्रवेश निषेध छ । हो, सुस्पष्ट र सुनिश्चित सन्देश दिएर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ढुक्क बनाएको एउटै राष्ट्र छैन । असलमा यस्तै लाग्छ कि सबै देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दुहुनो गाई मात्रै हो । त्यसैले दुविधाको सुविधामा समयको कस्तो प्रयोग गर्ने तपाईंकै हातमा छ ।
प्रवेश निषेधको नीतिका कारण प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेर पनि प्रवेश गर्न नपाइने गन्तव्यहरूका लागि नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिदिएको छ । सामान्यतया नो अब्जेक्सन लेटर बन्द भएपछि धेरैजसो गन्तव्य देशहरूको प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णयले धेरै विद्यार्थीहरूको दुविधालाई समाधान गरिदिएको छ भने पनि हुन्छ । संख्या घटेको छ तर प्रश्न सोधिएकै छ । हुन त धेरै विद्यार्थीहरू डलरमा ट्युसन फी तिरेर डिजिटल लर्निङको बाध्यात्मक अध्ययनमा छन् । यसकारण प्रश्न सोधिनु सामान्य नै हो । तिनको सपनामा तत्कालका लागि तालाबन्दी गरिदिएको छ भने पनि गलत हुँदैन ।
बोर्डरको मामलामा विशेष गरेर मलाई असाध्यै धेरै पटक सोधिएको प्रश्न हो- अस्ट्रेलियाको बोर्डर कहिले खुल्छ ? कहिले खुल्छ ? कहिले खुल्छ ? सर, भन्दिनुस् न कहिले खुल्छ, तपाईंलाई त थाहा हुनुपर्‍यो नि ।
यो प्रश्न पनि हो, चिन्ता पनि हो । जसको मसँग कुनै जवाफ छैन । म बबुरो, एक वैदेशिक अध्ययन व्यवसायी न हुँ । मसँग कुनै स्योरसट जवाफ दिन सक्ने हैसियत छैन । म मात्रै होइन, समग्र वैदेशिक अध्ययन परामर्श क्षेत्र नै तपाईंको प्रश्नलाई सिधासादा सम्बोधन गर्न असमर्थ छ । तपाईंको प्रश्नको उचित उत्तर खोज्दाखोज्दै हरदिन आजित छौँ । कृपया, माफ गर्नुस् तपाईंहरूको यो उल्झन् सुल्झाउने प्रयास मात्रै गर्न सकुँला ।
अर्काको देशको बोर्डर कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नमा जिन्दगी अल्झाएर, त्यसैलाई रुंग्दै आफैँलाई बल्झाएर कस्तो करिअर खोज्दै हुनुहुन्छ ? ओ डियर, टाइम इज एभ्रिथिङ । समय के होइन ? जिन्दगी, करिअर, पैसा, सबथोक हो ।
अस्ट्रेलियाली बोर्डरको कुरा, थाहा भए सम्भवत: स्कट मोरिसनलाई थाहा होला ।
तपाईंले मलाई एउटै प्रश्न धेरैपटक सोध्नुभयो । मसँग तपाईंलाई सोध्नैपर्ने केही प्रश्नहरू छन्ः
१) तपाईंको चिन्ता बोर्डर खुल्ने नखुल्ने विषयको हो कि आफ्नै करिअर विकासको ? करिअर बनाउने प्रक्रियामा तपाईं कहिलेसम्म अन्य कुनै देशको बोर्डर नीतिमा आउन सक्ने परिवर्तन पर्खिरहन सक्नुहुन्छ ?
२) के तपाईं कुनै देशको बोर्डर नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत वा पहुँच राख्नुहुन्छ ?
३) के तपाईंसँग तपाईंले रोजेको करिअरको गन्तव्यमा पुग्ने बाटो एउटै मात्र छ ? कि वैकल्पिक बाटो पनि खोज्नुभएको छ ?
४) स्टडी अब्रोड नै एक मात्र बाटो हो ?
५) अस्ट्रेलियाले बोर्डर खोलिहाल्यो भने पनि तपाईंकै लागि खुल्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ ?
६) डिजिटल लर्निङ एउटा विकल्प हो तर यसलाई कत्तिको बुझ्नुभएको छ ?
७) के तपाईंलाई लाग्छ कि स्टडी अब्रोडको उद्देश्यलाई डिजिटल लर्निङले सम्बोधन गर्छ ?
८) डिजिटल लर्निङमार्फतको सिकाइ र प्रतिफललाई परिश्रम, समय र लगानीसँग जोख्नुभएको छ ?
९) करिअरको संकटकालमा तपाईंले स्वअध्ययनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
भन्न त अस्ट्रेलियाले पनि प्रवेश निषेध गर्नुको पछाडि कोभिड १९ नियन्त्रण नै हो भनेको छ । कोभिड १९ को कुनै टुङ्गो छैन । भलै यसलाई काबुमा राख्ने कोसिस मात्रै हो प्रवेश प्रतिबन्धको नीति भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । तर, कोभिड १९ को आतंकले प्रवेश निषेधको नीतिलाई सजिलै जायजसिद्ध गरिदिएको छ ।
कोभिड १९ यता अस्ट्रेलियाले गैरअस्ट्रेलियाली र गैर बासिन्दाको अस्ट्रेलिया प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएको छ । मोरिसन सरकारका वक्तव्यहरू हेर्दा लाग्छ कि यो भाइरसका विरुद्ध लड्ने भरपर्दो रणनीति भनेकै 'प्रवेश निषेध' हो । कोभिड सेफ राष्ट्रका रुपमा देखाउन र संक्रमण नियन्त्रणमा अब्बल सिद्ध गर्न खोजेको प्रशंसामा अस्ट्रेलिया नाक फुलाएर बसेको छ । तर, संकटलाई अनावश्यक रुपमा गम्भीर बनाएको र विभिन्न अनुदानको ललिपपले अस्ट्रेलियालीलाई खुसी बनाउन खोजेको आरोप र आलोचना पनि छँदै छन् । यो सरल बुझाइ मात्रै हो । गुदी कुरा त जे पनि हुन सक्छ । आर्थिक, राजनीतिक वा ब्लेम कोभिड ।
कोभिड १९ करिब १ वर्षभन्दा बढी पुरानो भैसक्यो । भनिन्छ नि संकटमा असली रूप देख्न पाइन्छ । हामीले विकसित, समृद्ध, व्यवस्थित र परिष्कृत मान्दै आएका राष्ट्रहरूको पनि हालत उस्तै रहेछ । होइन भने अस्ट्रेलियाजस्तो देश कोभिड १९ र बोर्डरको सम्बन्धमा उहिल्यै स्पष्ट भैसक्थ्यो । संसार कोभिडमुक्त हुन सक्ला नसक्ला विज्ञान जानोस् कि दैव जानोस् । तर, कोभिड इज होक्स भन्नेहरूबाहेक कसैले पनि आजभोलि नै कोभिडमुक्त संसारको कल्पना गर्न सक्दैन । अस्ट्रेलियाली सरकार अनिवार्य पीसीआर परीक्षण, सशुल्क क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य बीमाका सर्तहरू लागू गरेर प्रवेश निषेध उहिल्यै खुला गर्न सक्षम थियो वा थिएन, मोरिसन नै जानून् । यतिबेला त, भारतबाट अस्ट्रेलिया पस्न खोज्ने जोकसैलाई जेल हाल्ने उर्दी जारी गरेको छ ।
पूरै अस्ट्रेलियाले भ्याक्सिन नलगाएसम्म वा अर्थतन्त्रमा सुनामी नआएसम्म वा अस्ट्रेलियालीहरूले विरोध नगरेसम्म मोरिसन सरकारको 'नो इन्ट्री नो कोभिड'को नाराले काम गरिरहला भन्ने आमअनुमान छ । भ्याक्सिनका कुरा पनि पढ्नुभएकै होला, कुनै ठेगान छैन । आफ्ना नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूका लागि अनेकन अनुदान एवं भत्ता सगर्व पस्केकै छ । अर्थतन्त्रमा सानोठूलो प्रवाह निरन्तर चलिहाल्छ नै । त्यसैले पनि मोरिसन सरकारको यस नीतिका विरुद्ध अस्ट्रेलियालीहरू छिट्टै विरोधको आवाज उठाउने छैनन् । ढोका बन्द राखेर आफ्ना मान्छे बचाउँछु, आफ्नालाई खुसी बनाउँछु भन्दै आइरहेकाहरूलाई गलत भन्न पनि मिल्दैन । उनको देश, उनकै नीति । बोर्डर खोल्नैपर्ने कारण पनि के छ र ? खोलिहाले पनि फिल्टर गर्दै खोल्ला । कहिलेसम्म कुर्नु ? कतिञ्जेल रुँग्नु ?
यो अवधिभित्र अस्ट्रेलियाभन्दा बाहिर रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि कोभिड १९ र बोर्डरको सन्दर्भमा जति पनि सूचना र सन्देश उपलब्ध छन् ती सबैलाई एउटै फोल्डरमा राखेर हेर्दा शून्य स्पष्टता र नगन्य गृहकार्य मात्रै देख्न सकिन्छ । तपाईंहरूका लागि कुनै गम्भीर चासो लिइएको छ वा लिइने छ जस्तो देखिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा तपाईं आफैसँग सोध्नुस्, बोर्डर कहिले खुल्छ ? मलाई थाहा छ, धेरै जना हातमा भिसा लिएर बस्नुभएको छ । कतिपय अनलाइन पढ्दै बोर्डर खुल्ने दिन पर्खिरहनुभएको छ । भिसाको प्रक्रिया सुरु गरेर परिणाम पर्खदै हुनुहुन्छ । भिसा लिने प्रक्रियाको तयारीमा हुनुहुन्छ । यो अन्योल र मनोदशाले विल्कुल आन्दोलित हुनुभएको छ । तर, तपाईंको आन्दोलित मनोदशालाई शान्त बनाउने जवाफ कसैसँग छैन । तपाईं मात्रै होइन, अस्ट्रेलियाली शिक्षामा आफ्नो करिअरको सम्भावना देखेका र सपना बोकेका कैयन् विद्यार्थीहरू विभिन्न देशमा छन् । सबैलाई स्पष्ट सन्देश दिन नसक्नु वा नदिनु अस्ट्रेलियाली सरकारको निजी मामला होला । तर, हेर्दा यस्तै लाग्छ कि यो विषयलाई संवेदनशील भएर हेर्नुको सट्टा पूरै उपेक्षा गरेर छोडिएको छ ।
अस्ट्रेलियाबाहिर रहेका गैरअस्ट्रेलियाली विद्यार्थीहरूका विभिन्न ब्लगहरू बताउँछन्ः हरेक गैरअस्ट्रेलियाली वा गैरबासिन्दा अस्ट्रेलियाभित्र होस् वा बाहिर, अस्ट्रेलियाका लागि दुहुनो गाई मात्रै हो । होइन भने, कोभिड १९ का नाममा 'नो इन्ट्री नो कोभिड' को नीतिमार्फत प्रवेश निषेध गरेको राष्ट्रले भर्ना एवं भिसा निवेदनका प्रक्रियाहरू पनि बन्द गर्न सक्नुपर्थ्यो । ट्युसन फि तिरेर भिसा लिएकाहरूलाई ट्युसन फि फिर्ता दिन सक्नुपर्थ्यो । उनीहरूको गुनासो मलाई पनि जायज नै लाग्यो तर डिजिटल लर्निङ आइहाल्यो । अनलाइन अध्ययन गरे पनि पोस्ट स्टडी वर्कका लागि योग्य हुने प्रावधान आयो । अस्ट्रेलियन शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनलाइन अध्यापन प्रवर्द्धन गर्न पनि सजिलो भयो । ट्युसन शुल्क तिरेर, भिसा लिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन अध्ययनका लागि बाध्य पार्न पनि सजिलो भयो ।
अन्त्यमा एउटा प्रश्न तपाईंका लागिः वैदेशिक अध्ययन केका लागि ?
क) कक्षाकोठा भित्र जो सिकिन्छ, त्यत्तिका लागि ?
ख) कक्षाकोठाभित्र कम बाहिरबाट धेरै सिक्ने/बुझ्ने अवसरका लागि ?
ग) अध्ययन र अनुभव दुवैका लागि ?
घ) प्रमाणपत्र र योग्यताका लागि ?
ङ) नयाँ संसार, भाषा, संस्कृति, जीवनशैलीका लागि ?
च) चुनौती र अवसरको अनुभवका लागि ?
बोर्डर कहिले खुल्छ भन्न सक्दिनँ । अन्योल मात्रै छ । यति मात्रै भन्न सक्छु– अर्काको देशको बोर्डर कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नमा जिन्दगी अल्झाएर, त्यसैलाई रुंग्दै आफैँलाई बल्झाएर कस्तो करिअर खोज्दै हुनुहुन्छ ? ओ डियर, टाइम इज एभ्रिथिङ । समय के होइन ? जिन्दगी, करिअर, पैसा, सबथोक हो । धेरै राष्ट्रहरू 'प्रवेश निषेध' को विकल्प छैन भन्छन् । तिनको विकल्प खोजिदिने हैसियत हामीसँग छैन । बरु सकियो भने आफ्नै योजनाको विकल्प खोज्न सकिएला । कोसिस गर्नुस् है ?
कोरोना कर्फ्युको शुभकामना !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २१, २०७८, ०९:५१:००